Nhau - PaGuangzhou Dhizaini Svondo uye Dombo Rakanaka gore rino, isu takanhonga pane chinyorwa chiri kuwana yakawanda yekukwezva. Maindasitiri mazhinji ari kunakidzwa nezvedombo rematombo.
Chii chinonzi sintered ibwe? Iyo yakagadzirwa nemurume Ultra compact komputa yakagadzirirwa kuti igare. Zvave zviriko kwemakore mashoma ikozvino, saka kana usati wazvigadzira nazvo kare, unogona kunge uchikurumidza. Chero nzira, iwe uchazoda kudzidza kutema sintered dombo nenzira kwayo. Nounyanzvi hwenyanzvi yako uye nematurusi akakodzera, iwe unowana zvakanyanya kubva pane ino inotyisa zvinhu.
Chii chinoita kuti sintered ibwe chinhu chakakura kudaro kugadzikana kwayo uye kuita kwakawanda. Sintered dombo inoshandiswa yekugara uye yekutengesa kushandiswa, mukati nekunze kunyangwe nemidziyo. Uye zvave zvichitenderedza kwenguva yakareba zvekuti iwo mavara uye magadzirirwo esarudzo akanyatsogadzirwa. Zvitoro pasirese zvirikutengesa sintered ibwe imba, uye nekuisa sintered mabwe pakatarisana, pasi, madziro, uye ekunze ekumonera machira.
Zvinetso zveSintered Stone
Izvo zvakasarudzika zvivakwa zve sintered dombo zvinogona kuzviita imwe yeasina kuregerera matombo ekucheka.
Semuenzaniso, mamwe matombo ane patani yakadhindwa pamusoro. Chero machipisi kana kusakwana pane izvi zvinogona kukanganisa chimiro mushure memucheto lamination. Kune mamwe matombo akavezwa senge Neolith ane dhizaini inomhanya kuburikidza nesirabhu, iwe uchiri kuzoda zvakatemwa zvakatwasuka kuita kuti chako chakapedza chigadzirwa chioneke chakanakisa.
Kana iwe ukawana kucheka zvakanaka, mhando yebasa rako rapedzwa ichave yepamusoro-tier. Iwe unenge uine rese basa mune sintered zvinhu iwe zvaunogona kubata. Get zvisizvo uye iwe ungangoita chero zvinotora kudzivirira izvo zvinhu pane ramangwana mabasa.
Kunyangwe iwe uine zambuko yekucheka muchina kana yemvura banga muchina wekucheka chishandiso, asi iyo yekumhanyisa kumhanya inononoka, kuderera kushanda, kucheka zvinhu zvinoshandiswa, saka mutengo wekugadzirisa wakanyanya kwazvo.
Maitiro Ekutema Sintered Dombo nekukurumidza uye yakaderera mutengo
Kubudirira pachinhu ichi kuri nyore: chakatwasuka uye shaped kucheka.
Yakachena kwazvo yakananga uye akachekwa akachekwandizvo zvaunofanirwa kune mhedzisiro-yekupedzisira mhedzisiro inokuwanisa iwe kuendeswa. Kuti uwane izvo zvakatemwa chaizvo unoda michina chaiyo. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine, Kana iwe usinga funge nezvekudyara mune imwe. Iyo otomatiki sintered ibwe yekucheka muchina yakakwira kunyatsoita uye kuomarara haina kufananidzwa. Yekumhanyisa kumhanya inosvika pamamita zana nemakumi masere paminiti, Takaita kuyedzwa kwakakura kwemuchina wedu pane sintered matombo zvigadzirwa. Tine chivimbo chekuti iwe unowana mhedzisiro yakafanana vatengi vedu vari kuyambuka China.
Dhizaini yekugadzira, girazi remota, girazi remidziyo, girazi rehunyanzvi, girazi rekushongedza, girazi remakabati, girazi rakadzika, girazi rakapetwa
Post nguva: Jan-08-2021